Astaan Minaarad 155 mitir ah oo maanta kontan jirsatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Astaan Minaarad 155 mitir ah oo maanta kontan jirsatay
La daabacay fredag 12 maj 2017 kl 17.14
Munaaradda Kaknästornet. Sawir looga qaadey helikopter. sawir: Christine Olsson/TT
Minaaradda ama burjiga lagu magacaabo Kaknästornet ayuu dhismihiisu jiray intii uu dalku lahaa mowjad keliya ee idaacadaha la iska daawado oo caddaan madow ah. Hase yeeshee maanta laga qeeybiyo minaaraddaa ugu yaraan 600 oo kanaal iyada oo.
Dhismaha ugu dheer magaalada Stockholm waxaa dhismihiisa la bilaabay sannadkii 1963-dii iyadoona ey afar sannadood dabadii daah-fureen wasiirkii is-gaarsiinta Olof Palme iyo duqii magaalada Stockholm ee waagaasi och finansborgarrådet Hjalmar Mehr.
Minaaradda ama burjigan 34-ka dabaq dhererkeedu yahay, buuxinna doonta maanta oo jimce ah 50 sannadood ayey ku rakiban yihiin 170 war laliye, midkaasina oo ey muhiandiseen naqshadeeyeyaasha Hans Borgström iyo Bengt Lindroos. Daaqadaha ayey ku rakiban yihiin muraayado aanu kuleeylka qorraxdu soo dhaafin.
Sannadkii 1967 ayuu shabakadda idaacadda la iska daawado ka koobnayd mowjad keliya oo caddaan madow ah ah. Maanta ayey ka kooban yihiin 600 oo moowjadood oo laga baahiyo minaaradda Kaknästornet oo maanta 50 jirsatay. Dhambaalada ka baxa moowjadahaa ayaa u gudba macaamiisha iyada oo loo marineyo shirkadda dawliga ah ee Teracom.
Minaaradda ayaa barnaamijyada aan sii deeyn, hase yeeshee baahisa oo keliya dhambaalka. Halka barnaamijyada laga laliyo udubbada ku yaala xaafadda Nacka ee magaalada Stockholm.